တမ်းပလိတ်:First article - ဝီကီပီးဒီးယား
မင်္ဂလာပါ Jimbo။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်! ဒီနေရာကို သင်နှစ်သက်ကျေနပ်ပြီး ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကံမကောင်းလှစွာပဲ သင်ဖန်တီးလိုက်သော စာမျက်နှာ သည် ဝီကီပီးဒီးယား၏ လမ်းညွှန်ချက်များ အချို့နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက် ထိန်းသိမ်းထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆောင်းပါးများ ဖန်တီးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဖတ်ရှုလိုမယ့် သင်၏ ပထမဆုံး ဆောင်းပါး ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာ ရှိနေပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ အခက်အခဲတွေ့နေပြီး အကူအညီ ရယူလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ကို လာခဲ့ပါ။ လူသစ်တွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ လင့်ခ်အချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
သင်၏ ပထမဆုံး ဆောင်းပါး
ဝီကီပီးဒီးယန်း တစ်ယောက်အဖြစ် တည်းဖြတ်ရေးသားခြင်းကို သင်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာတွေမှာ ကျေးဇူးပြုပြီး (~~~~) ကို ရေးသားခြင်းဖြင့် သင့်အမည်ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါ။ သင့်မှာ မေးခွန်းများရှိနေပါက Wikipedia:Questions သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်တဖန် ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်! ~~~~
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တမ်းပလိတ်:First_article&oldid=302385" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ မေ ၂၀၁၆၊ ၀၃:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။